Maxaa keenay ineey Fanaaniinta Somaaliyeed baryahan sheegtaan heeso aysan leheen. - Wargeyska Faafiye
Home 2012 February 22 .Warka Maxaa keenay ineey Fanaaniinta Somaaliyeed baryahan sheegtaan heeso aysan leheen.
Maxaa keenay ineey Fanaaniinta Somaaliyeed baryahan sheegtaan heeso aysan leheen.
February 22, 2012 · by	Liban Farah ·
Fanka Soomaaliyeed wuxuu soo maray heerar kala duwan , kadib markuu dhacay dagaalkii sokeeye , shacabkiina ay ka soo Qexeen wadankii, ayaa waxaa halkaa ku lumay curintii ama uruuriskii amaba sameeyntii fanka Soomaaliyeed .
Wixii dagaalkii ka dambeeyay waxaa soo baxay fanaaniin cusub kuwaaaso masraxa isla soo taagay HEESO ay lahaayeen fanaaniintii ka horeeysay , haba ku fadeexadooban , magacyo na ha ugu baxaan sida magaca WAJIYO XUN oo ay soomaalidu dhib badnidoodu ku dhijiyeen fanaaniinta waagas jirey .
Laakiin hadaad si u fiirisid layaab ma leh sababtoo ah fanaaniintaasi dan ayaa u geeysay ineey xadaaan heesahaas maadama uu dalkii burburay kadibna halkaas uu ku burburay FANKII la na waayey Abwaanin u qorta heeso cusub.
dacaayad badan kadib ,ayaa waxaad mooda in fanaaniintu hada badanaa ay la soo baxeen heeso CUSUB oo ay iyagu leeyihiiin , taaso ah wax lagu farxo , horumar na u ah Fanka Soomaaliyeed .
Laakin waxaa kalo oo dhacay in ay fanaaniintu QAAR ay u “fikireen” si yaro, oo aad u dhib yar , iyagoo is yiri waxaa tihiin SMART , ama XARIIF , ama qof caqli badan ..
waxeey sameeyeen faanaaniintani ineey dhinac mareen SHAQADA dhibaka badan ee sameeynta iyo QORIDA HEESAHA ,iyagoo la yimi fikir cusub kaa soo ah ..
“”MAXAAN HEES QORID ISKUGU MASHQUULIN MIYAAN AWOODIN INAAN RAADIYO HEESIHII HORE…. KUWA AAN SAAS CAAN KA U EHEEN ,,, Kadib na aan shacabka ku war galiyo inaan ANIGU qoray HEESAHAAS , oo aan anigu leeyahay.
Waa Fikrad fiican dabcan LAAKIIN , waxeey ilaaween amaba aysan xisaabta ku darsan in dadka la yiraahdo “SOOMAALI” ay yihiin dad aad u dhib badan , aadna u jecel ineey daba galaan qofka iyagoo raadinaya si ay ku fadeexadeeyaan.
Hadaba isla sidaaas aan soo sheegnay ayaa ku dhacday dhowr fanaan durbaba ,, fanaaniintaas oo aaad u CEEBOOBAY kadib markii ay QARAXDAY beentii ay shacabka u sheeegeen,
Waxaa dhacday in laga daba keeno CADEEYN maqal iyo MUUQAAL AH , taaso beeneeyneysa sheegashadii ay sheegteen heesaha la sameeyay 30 Ilaa 40 sano ka hor .
Halkan waxaa idinku heeynaa labo ka mid ah fanaaniintaas .
FANAANKA KOOOWAD WAA ….
FANAANADA LABAAD WAA .
Sawiro: Qaraxa Hotel Naasa Hablood .
Daawo wareeysi Alshabaab iyo waxeey ka qabaan shirka London
The first Restaurant in New York City that offers Somali cuisine.
40 wadan oo dagaal diyaar u ah